त्रिचन्द्र ‘प्रतीक्षा’ – Page3– मझेरी डट कम
यो जीवन केवल आशै आशमा बाँच्दै
भोलिको मीठो कल्पना सजाउँदै
आजलाई भोलिमा हराउन पर्छ,
भोलिको मीठो सम्झना सजाउँदै
आजलाई भोलिमा हराउन पर्छ ।
”सृजना घरमा हुनुहुन्छ?” मेरो यस प्रश्नले रुमी झस्किन्छे ।
”सृजना दिदी यहाँ हुनुहुन्न दिदी त आफ्नै घर बुटवलमा बस्नुहुन्छ । बस्नुसन्. कति कामले आउनु भा’को ।”
”सृजनाको विवाह भैसक्यो?” मेरो प्रश्नमा रुमी भन्छिन्, ”हो भैसक्यो, अब त दिदीको बच्चा पनि भैसक्यो ।” रुमीको त्यस्तो कुरा सुनेपछि मलाई सपना हो वा विपना हो छुट्याउन गार्‍हो लाग्यो ।
म सोध्छु वतासलाई, कहीं मेरा फूलहरू
उसले चुर्डाई दियो कि ?
आशाहरू जति मैले सजाए पनि
रहरहरू सबै मरिदिन्छन्?
नव आवाज साप्ताहिक
शून्यता भित्र म
मस्तिष्कलाई कलम बनाई
कल्पना शक्तिले मसीभरि
शून्यताको आकाश, मेरो हृदयमा
एउटा कविता लेखिरहेछु ।
जून मेरो कविताको मुख्य अतिथि हो
अनि अनगिन्ती ताराहरू मेरो कविताका दर्शक
जून र तराको उज्ज्वल प्रकाश
यहाँ द्यौताको अनुहार चोइटिरहेछन्
चामल र पैसाको प्रहारले,
देश, विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण साहित्यकारहरुलाई आह्वान
टि.सि.एस. इन्टरनेशनल पब्लिकेशनले आगामी नयाँ वर्ष २०७० वैशाख १ गतेका दिन ५०१ जना युवा साहित्यकारहरुको लघुकथालाई (५०१ लघुकथा संग्रह) पुस्तकाकारका रुपमा बजारमा ल्याउन लागेको सहस्र जानकारी गराउँदै यथाशक्य छिटो तलको ठेगानामा १०० शब्दभन्दा नबढाई आफ्नो लघुकथा साथमा व्यक्तिगत छोटो परिचय साथ फोटो तलको ईमेल बक्समा पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
नेपाली समाजमा नागलाई पूजा गर्ने चलन परापूर्वकालदेखि चलिआएको छ, हरेक वर्षो साउन शुक्लपक्ष पञ्चमीलाई हामी हिन्दू धर्मालम्बीहरूले नाग पञ्चमीको रूपमा नागको प्रतिविम्ब (चित्र) लाई भित्तामा टाँसेर पूजा गर्ने गर्दछौं, नागका अष्टकुल अर्थात् अनन्त, बासुकी, पद्म, महापद्यम, तक्षक, कुलीर र कर्कट र शङ्ख नागको चित्र टाँस्नाले त्यस्तो घरमा चट्याङ नपर्ने तथा आगो र सर्पको भय र विपत्ति हुँदैन भन्ने जनविश्वास रहिआएको पाइन्छ ।
युवामञ्च २०६५ साउन
मानिसको जन्मपछि मृत्यु अवश्यंभावी छ । मानिसको जीवन आमाको कोखबाट जीवन आरम्भ यो हाम्रो भौतिक शरीरको अन्त्य मृत्युवाट समाप्त हुन्छ ।
हाम्रो हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्म १६ संस्कार हुने गर्दछ, जसमा अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि संस्कारलाई अन्तिम मानिन्छ । हाम्रो देशका विभिन्न जनजातिहरूमा आ-आफ्नो धर्म परम्परा रीतिअनुसार मृत्यु संस्कारलाई पुरा गर्ने गरिन्छ । नेपालका केही जातिहरूले गर्ने अन्तिम संस्कारको बारेमा थाहा पाउने हैन त ?
‘आलु’ शब्दको अर्थलाई नेपाली शब्दसागरमा ”अन्न, तिउन, तरकारी र अचारमा मिलेर वा सट्टामा भोजन बन्ने कन्द विशेष, कासकन्द, कासालु, पेचक” भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपालीमा खासै राम्रो अर्थ दिंदैन ‘आलु खाने’ भन्ने शब्दले । ‘आलु खाइस् !’ भनेर कसैले भन्यो भने जो कसैको पनि कन्सिरी तातेर आउँछ ।
नेपालमा हरेक वर्ष गोबर्द्धन पूजाको दिन आलु कवि महोत्सव मनाइने गरिन्छ । सहभागी कविहरुले आलुका ५ थरिका परिकार खाएर आलुकै बखान स्वरुप कविता वाचन गरेर ‘आलु कवि महोत्सव’ मनाउँदै आइरहेको धेरै वर्षभैसकेको छ ।
कमलाको ‘जीवन एक परिक्रमा’
नवदित कवयित्री एवं कथाकार कमला श्रेष्ठद्वारा रचित ‘जीवन एक परिक्रमा’ नामक पुस्तक भर्खरै बजारमा आएको छ । बौद्धिक आकारको कभर आवरणभित्रको पुस्तक सुन्दर बनेको छ ।
‘जीवन एक परिक्रमा’भित्र- शुभेच्छा पत्र, प्रकाशकीय, बेरोजगारहरू बेफुर्सदीहरू, कविता कस्तो हुन्छ, रक्सी अमृत भए, गीत जीवन एक सपना, नारीको विवशता, जीवन, खाली कागज, ठगिएको भाग्य, ‘जीवन एक परिक्रमा’, बेसहारा जीवन, गजल, मरेर जिउँदैछु, संसारमा एक्लै छु, मेरो कथा, र ईश्वरको अर्को रुपः नारी, फूल आफ्नै निम्ति फुल्छु, लक्ष्यविहीन यात्री, कसैलाई गुनासो पोखिन, विडम्बना, जिउँदैछु, प्रश्नोत्तर, आदर्शको दुःख, पुरानो मन्दिर, कोपिलामै बगर भो जिन्दगी, निर्रथक जिन्दगी, रहर, चार टुक्रा कविता र सेतो गुलाफको फूल कथा गरी जम्मा तीसवटा कविता, एक कथा र दुई अन्य गरी ३६ वटा रचनाहरू रहेको ‘जीवन एक परिक्रमा’ हुने विरुवाको चिल्लो पात भने अवश्य छ । सर्सती पुस्तक पढ्दा नवोदित प्रतिभा कमलामा तमाम प्रतिभाहरूमा हुने नून, भुटुन र अन्य मरमसलाहरू मनग्गै रहेका छन् । मोहन दुवालका अनुसार ‘अभ्यास र अध्ययनपछि कविता बन्दै जान्छन्’ भनेझैं कवयित्रीमा अध्यापन, साधन र आराधना अझै मनग्गै गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छु ।
नेपाली शब्दसागर शब्दकोशमा रुद्राक्ष शब्दलाई ‘लामा-लामा हरिया केशर हाँगामा-फूल सेता हुने स्याउले एक ठूलो जातको रुख र त्यसैको साना ओखर वा तिमिला खाले काँडे फल ।’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
रुद्राक्षलाई हाम्रो गाउँघरमा दाना भनेर पनि चिनिन्छ । धार्मिक महत्त्वको वस्तुका रूपमा वनस्पति रुद्राक्षको महिमा धेरै छ ।